Boxe Pro : nodimandry i Cassius Clay | NewsMada
Boxe Pro : nodimandry i Cassius Clay
Misaona ny tontolon’ny fanatanjahantena maneran-tany, indrindra fa ny ady totohondry matihanina. Nodimandry tampoka ilay mpikatroka Amerikanina, Cassius Marcellus Clay na Cassius Clay, fantatra ihany koa tamin’ny anarana Mohamed Ali.
Nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-74 taonany ity mpikatroka matihanina teo amin’ny ady totohondry ity. Noho ny aretina nitaiza azy, Parkinson, no nitarika izao fahalasanany, ny asabotsy 4 jona, teo.
Saika, naneho ny alahelony avokoa ireo atleta maneran-tany tamin’ity vaovao mampalahelo teo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ity, anisan’izany ry Tony Parker, mpilalao basikety NBA, sns.
Ankoatra izay, nametraka tantara teo amin’ny tontolon’ny ady totohondry i Mohamed Ali. Saika nataony KO avokoa mantsy ireo mpifanandrina tamin’ny fotoan’androny. Tsy afaka nitaiza ireo mpandimby azy moa izy noho ilay aretina nahazo azy.